Chainalysis - Shirkadda wax baabbi'inayay ku Seeraar magaciisa ku - Blockchain News
Chainalysis – Shirkadda wax baabbi'inayay ku Seeraar magaciisa ku
Inta badan wadamada horumaray, shaqo firfircoon ka yar yahay hab inay soo bandhigto xeerarka sharciyeynta cryptocurrencies oo ku furid. In nuqulkii hore ee biilasha, waxay inta badan waxaa ay taageerayaan shirkadaha si ay ula socdaan shabakadaha go'doominta, mid ka mid ah ugu caansan – Chainalysis. Kaliya ee 2017 shirkadda kasbadeen ku saabsan $ 700,000, iskaashi la hay'adaha fulinta sharciga gobolka iyo.
Chainalysis la aasaasay 2014 by Jano Moller, Jonathan Levin iyo Michael Gronager. jihada ugu weyn ee Shirkadda waxaa mareenada iyo xawaalad cryptocurrency la socodka la dagaallanka lacagta la dhaqay iyo musuqmaasuq. Shirkadaha laga heli karo adeegyada la midka ah waa badan, laakiin ku dhowaad dhammaan waaxaha US, iyo sidoo kale ururada Yurub sida Europol, codsan in Chainalysis.
Sanadkii la soo dhaafay Chainalysis dheeraad ah helay ka badan $ 700,000 ka US Department of Homeland Security (DHS), Adeegga Dakhliga Gudaha Maraykanka (IRS) iyo Socdaalka ee Maraykanka iyo Customs Service Control (ICE) ay shaqada. Sidoo kale sannadkii hore, shirkadda waxaa si joogto ah u soo xidhiidhay hay'adaha gaarka ah, sida ku cad wararka biloodle fiiqaya in ay xiriir badan oo heshiisyo iskaashi.
Oo mid ka mid ah macaamiisha joogtada ah ee Chainalysis ahaa Bureau Federaalka Mareykanka ee Baadhista (FBI), taas oo uu si joogta ah u buuxiyey xisaabaadka shirkadda ee sanadihii la soo dhaafay.
Assistance in baaritaano
Thanks to kaashanaya Chainalysis, FBI-maareeyey si loo gaaro natiijo la taaban karo in baaritaan falalka ka qaybgalayaasha goobta si qarsoodi ah ganacsiga Silk Road, iyo sidoo kale bartaan oo ku saabsan faahfaahinta kacday oo ka mid ah sarrifka Mt Gox. Ka dib oo dhan, shaqaalaha Chainalysis dabagal ku maqan 650,000 bitcoins, oo ogaaday inta lagu jiro dhagaysiga in Congress ah.
Intaa waxaa dheer, in shaqada ee shirkadda la socodka mahad, dabayaaqadii November 2017, maxkamadda US federaalka ku amartay sarrifka Coinbase si ay u bixiyaan xog qarsoodi ah si ay u 14,000 users. go'aan noocan oo kale ah waxaa loo sameeyey in iftiinka baaritaanka by Adeegga Dakhliga Gudaha Maraykanka (IRS), kaas oo looga shakisan yahay in dadka isticmaala ee is-dhaafsiga dakhliga laga helo iibka ee cryptocurrency qaata, xaaladaha inta ugu badan, tago ka cashuur la siiyo iska. Sidaas, sida ku cad xogta IRS, waayo, 2015, canshuurta on faa'iidada ka hawlgallada la Seeraar ayaa lagu bixiyey oo kaliya 802 dadka.
shirkadda ee website sheegay in Chainalysis ayaa aaminsan in cryptocurrency iyo technology xanibeen, iyo goolka shirkadda ee waa in ay bixiso ururada qalab si looga hortago falalka is daba marinta gudbikaraa oo ka mid ah maaliyadda, halka ixtiraamaya xaq u leedahay in sir. Si kastaba ha ahaatee, dhab ahaan, adeegyada blockanalysis shirkadda ee xirmaan shaqsiyaad gaar ah la xawaalad gaar ah on shabakadda.
Sidaas, si adeegyada Chainalysis mahad, IRS, tusaale ahaan, kormeera falalka heystana bitcoins iyo cryptocurrencies kale oo kormeera bixinta lacagtii Canshuurta. Markaasaa waxaa taas ka dhigan tahay xawaalad in la cryptocurrencies, sida Seeraar, looma tixgelin karo si qarsoodi ah. Sidoo kale, shirkadaha isticmaala adeegyada Chainalysis hesho warar faahfaahsan oo ku saabsan macaamil ganacsi on block ah, macaamiisha iyo la-hawlgalayaasha ka iman kara ay.
Xaqiiqada ah in shirkadda Chainalysis waxaa helo macaamiisha iyo aad u badan oo ka mid ah wakiilo ka socda gobolka iyo qaab-dhismeedka, walwal xubno badan oo bulshada ka crypto rumeeyey mustaqbalka cryptocurrency aan xeerka gobolka iyo xaq ah qof walba in magaciisa. Si kastaba ha ahaatee, sida uu sheegay madaxa fund Hermitage Capital Bill Browder, ay sabab u tahay falalka shirkadaha sida Chainalysis, cryptocurrencies waxa ay noqonayaan hab sii kordheysa soo jiidasho leh oo lagu kalsoonaan karo ee maalgashiga oo loogu talogalay maal-.